Soosaarka Sanjabiisha Shiinaha iyo Warshad | Nongchuanggang
Budada sinjibiil waxay ka samaysan tahay jajab sinjibiil. Sababtoo ah jajabyada sinjibiil waxay waxtar weyn u yeesheen caafimaadka jirka iyo maskaxda ee jirka, sidaas darteed cabitaanka budada sinjibiil, dabcan, waxay sidoo kale caafimaadka ka caawin kartaa si weyn. Sidaa darteed, budada sinjibiil waxay leedahay hurdo xumo, kor u qaadista rabitaanka cuntada, iska caabinta qiiqa, xakameynta burooyinka, gabowga, qabow, ka hortagga jirrada dhaqdhaqaaqa, hagaajinta tayada hurdada iyo dhinacyada kala duwan ee doorka iyo saameynta. Sidaa darteed shaqada caloosha ma fiicna, rabitaanka cuntada oo liita, astaamaha waa daran yihiin, hurdo xumo, budada sinjibiil waa nooc ka mid ah cuntada & daawada aad u wanaagsan.
Sharaxaada alaabada budada sanjabiilka ah: Budada sinjibiil waxaa laga sameeyaa jajab sanjabiil ah. Sababtoo ah jajabyada sinjibiil waxay waxtar weyn u yeesheen caafimaadka jirka iyo maskaxda ee jirka, sidaas darteed cabitaanka budada sinjibiil, dabcan, waxay sidoo kale caafimaadka ka caawin kartaa si weyn. Sidaa darteed, budada sinjibiil waxay leedahay hurdo xumo, kor u qaadista rabitaanka cuntada, iska caabinta qiiqa, xakameynta burooyinka, gabowga, qabow, ka hortagga jirrada dhaqdhaqaaqa, hagaajinta tayada hurdada iyo dhinacyada kala duwan ee doorka iyo saameynta. Sidaa darteed shaqada caloosha ma fiicna, rabitaanka cuntada oo liita, astaamaha waa daran yihiin, hurdo xumo, budada sinjibiil waa nooc ka mid ah cuntada & daawada aad u wanaagsan.
Budada sinjibiil ee xilliga kulul waxay leedahay saamaynta xiisaha, hoos u dhig badan heerkulka dhididka, xiisaha jirka; Budada sinjibiil waxay baabiin kartaa daalka, lulmada, cunno xumida, hurdo la’aanta, caloosha oo kacsan, calool xanuun iyo astaamo kale.
Xermooyinka 'Gingerol' iyo 'diphenylheptane' oo inta badan ku jira budada sinjibiil waxay leeyihiin anti-oksaydh xoog leh iyo saamaynta yareynta kolestaroolka. Saamaynta anti-buro; Cun budada sinjibiil waxay dib u dhigi kartaa gabowga, dadka waayeelka ah waxay badanaa cunaan budada sinjibiil waxay ka saari karaan "dhibcaha dareemaha".
Budada sinjibiil waxay ka kooban tahay maaddo la mid ah sodium salicylate, taas oo u dhiganta rinjiga khafiifka ah iyo xinjirowga dhiigga. Budada sinjibiil waxay leedahay saameyn gaar ah yareynta dufanka dhiigga, hoos u dhigida cadaadiska dhiigga, kahortagga infarction myocardial iyo daahitaanka gabowga.
Ku rid shaaha-qaadada budada sinjibiil biyo diirran (qiyaastii 40 darajo) oo ku qoo biyo kulul si aad u qoyso cagaha bukaannada leh qandho iyo hargab. Budada sinjibiilka ayaa si macquul ah uga fogaan kara isbeddelka horumarka ee cudurka wuxuuna ka hortagi karaa qandhada iyo qabowga. Xitaa haddii aadan qabin qandho ama hargab, budada sinjibiil waxay sidoo kale kaa yareyn kartaa qabowga adiga oo cagahaaga ku qoynaya biyo kulul. Budada sinjibiil ayaa kaa caawin karta kahortaga hargabka.
Kala duwanaansho Soosaarida sinjibiisha
Fasalka Fasalka Pharma
Magaca Badeecada Soosaarida xididka sinjibiisha
Faahfaahinta 5% 10% By HPLC
Habka Imtixaanka HPLC UV
Qaybta la Isticmaalay Xididka
Xirmo 25kg / durbaan
Cabbirka walxaha 100% Gudub 80 Mesh
Hore: Sanjabiil la jeexjeexay
Xiga: Sanjabiil dabiici ah